गगनजी ! प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर भन्ने तपाइले ७७ वर्षीय वृद्धका लागि भोट माग्न लाज लाग्दैन ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गगनजी ! प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर भन्ने तपाइले ७७ वर्षीय वृद्धका लागि भोट माग्न लाज लाग्दैन ?
काठमाडौं, कास्की २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा यहीँ मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चुनावी सभामा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा दिनहुँ सम्बोधन गरिरहन्छन् । उनको बोल्ने शैलीले धेरैलाई प्रभावित पनि बनाउँछ । उनी ७७ वर्षे वृद्ध उम्मेदवार खेमराज पौडेलका लागि भोट माग्दै सम्बोधन गर्छन ।
अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर गए । महिना दिनमै दुइपटक उपचारका लागि गएपछि कांग्रेसका युवा नेता थापाले बा भनेरै ओलीलाई आराम गर्न सुझाव दिए । त्यतिमात्रै होइन नेतृत्व युवालाई दिन आग्रह गरेर युवा नेताको पक्षमा वकालत गरे ।
उनको यो अभिव्यक्तिको कतै प्रशंसा त कतै आलोचना भयो । तर, धेरैले प्रधानमन्त्रीलाई आरामको जरुरत रहेको महसुस पछि मात्रै गरे, यति सम्मकी नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले । यो त त्यतिखेरको कुरा भयो । उसो धेरैजसो समय राजनीतिमा गगनले युवा नेतृत्वको वकालत गर्छन र उनी यसको पक्षधर पनि हुन् ।
तर, आफ्नो यो धरातल र आदर्श विचारलाई कुल्चिँदै गगन अहिले कांग्रेसले कास्की २ बाट उठाएका वृद्ध उम्मेदवार खेमराज पौडेलका लागि भोट माग्दै हिँडेका छन् । जून उनको नैतिकता विपरितको कदम हो ।
आफै युवा नेतृत्वको अभियानका लागि लबिङ गर्ने, ६७ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरामको आग्रह गर्ने गगन आफ्नै पार्टीका वृद्ध उम्मेदवारको पक्षमा भने रातदिन भोट माग्न खटिएका छन् । परिवर्तनका लागि उनले आफ्नै पार्टीबाट वृद्ध उम्मेदवारलाई आराम गर्नुस् अथवा उम्मेदवार बनाउनुअघि नै युवालाई टिकट दिन लबिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै भोट मागेर हिँडेपछि उनी आलोचित बनेका छन् ।